पूजा भन्छिन् - प्रेमगीतको छायाकंनमा फेरि फर्किन चाहन्छु
Sat, Jun 23, 2018 | 11:44:01 NST
10:09 AM ( 11 months ago )
काठमाडौं, असार २७ – अभिनेत्री पूजा शर्माले मधुमासबाट सिनेमामा डेब्यु गरेकी हुन् । पहिलो सिनेमाबाट खासै राम्रो प्रतिकृया र सफलता नपाएकी उनले त्यसपछि अझै पनि, चङखे सङखे पङखेमा काम गरिन् । उनलाई यी दुई सिनेमाले केही मात्रामा चर्चामा ल्याए । तर उनको सफलता भने औसत रह्यो ।
उनले जब सिनेमा प्रेमगीतमा काम गरिन् उनी नेपाली सिनेमा उद्योगकी लभर गर्लको रुपमा स्थापित भईन् । बच्चा देखि बुढासम्म सबैको मन पर्ने नायिका बनिन् । प्रेमगीतले उनलाई दर्जनौँ सिनेमामा काम गरे बराबरको सफलता दियो।
प्रेमगीतको सफलताबारे कुरा गर्दै उनी भन्छिन्, “मलाई एउटा उदाहरणिय सिनेमा खेल्न मन थियो । दर्पण छायाँ नेपालमा सबैभन्दा धेरै कमाउने पहिलो सिनेमा हो र यसलाई कसैले पनि बिर्सेको छैन । यो सबैको मन पर्ने सिनेमा बन्यो । यस्तै अविस्मरणिय, बच्चा देखि बुढा सबैले मन पराउने सिनेमा खेल्ने ह्याङ थियो म मा । त्यो प्रेमगीतले पूरा गरिदियो । यो मेरो जीवनकै ठूलो सफलता हो ।”
अहिले भने पूजा प्रेमगीतको टिममा छैनन् । तर यो सिनेमाका धेरै यादहरु छन् जसलाई उनी बिर्सन सक्दिनन् । जस मध्येको एउटा याद हो सिनेमाको छायाकंन । बिगतका कुनै पलमा तपाईँ फेरि फर्किन चाहनुहुन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भनिन्, “मिल्ने भए म फेरि स्कुलका दिनहरुमा, बाल्यकालमा फर्किन्थे । त्यस्तै प्रेमगीत छायाकंन गर्दामा ती दिनहरुमा पनि फेरि फर्किन पाए, आहा ! भन्ने लाग्छ । ”
कुराकानीकै क्रममा हामीले पूजालाई तपाईँको नजरमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा भाग्यले चलेका तीन कलाकार ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले जवाफमा पहिलो नाम लिईन् अनमोल केसीको । त्यस्तै उनले अभिनेता भूवन केसीलाई पनि यहि सूचिमा राखिन् । तर उनको मतलब भुवन बिना मेहनत र बिना काम भाग्यले मात्रै चलेका हुन् भन्ने भने थिएन ।
उनले भुवन केसी लामो समयसम्म सिनेमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनु र चर्चा पाईरहनुलाई उनको भाग्य भनेकी हुन् । “उहाँको भाग्य नै बलियो हो अहिलेसम्म सिनेमा क्षेत्रमा राज गरिरहनु भएको छ । दर्शकको माया पाईरहनु भएको छ”, पूजाले भनिन् ।
पूजाले अभिनय गरेको सिनेमा म यस्तो गीत गाउँछु असार ३० मा रिलिज हुँदैछ । यस सिनेमामा पूजासँगै पलले अभिनय गरेका छन् । “म यस्तो गीत गाउँछु” लाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने पूजा र सुदर्शनले सयुंत्त रुपमा यसलाई निर्माण गरेका हुन् । सिनेमाको प्रमोशनको क्रममा हामीले उनीसँग भिडियो कुराकानी गरेका छौँ । जसमा उनले अन्य केही गोप्य कुराहरु पनि सेयर गरेकी छिन् ।